၁. ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးက ဘယ်လိုသင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကို သင်ပေးပြီး ညံ့တဲ့ပညာရေးကတော့ သင်ယူရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ သင်ပေးတယ်။
၂. ကောင်းတဲ့ပညာရေးက လူအချင်းချင်း၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆင်ပြေအောင်ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရေးနဲ့ အရေးအဖတ် အတွက်အချက်နှစ်မျိုးစလုံးကို သင်ကြားပေးပါတယ်။ ညံ့တဲ့ပညာရေးကတော့ သင်ပေးရ လွယ်ကူ တဲ့ အရေးအဖတ်အတွက်အချက်တွေလောက်ကိုသာ အဓိကထားပါတယ်။
၃. ကောင်းတဲ့ပညာရေးက သင်ယူလေ့လာမှုကို သဘောကျနှစ်သက်စေပြီး ညံ့တဲ့ပညာရေးကတော့ သင်ယူ လေ့လာမှုကို မုန်းတီးစေတယ်။
၄. ကောင်းတဲ့ပညာရေးက ဘက်ပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အားပေးပေမယ့် ညံ့တဲ့ပညာရေးကတော့ ကျောင်း သင်စာတွေအပေါ် စွမ်းဆောင်မှုကိုပဲ အဓိကထားတယ်။
၅. ကောင်းတဲ့ပညာရေးက ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ ညံ့တဲ့ပညာရေးကတော့ ရေးဆွဲထားတဲ့ အစီအမံအတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့ကို တွန်းအားပေးတယ်။
၆. ကောင်းတဲ့ပညာရေးက အများနဲ့မတူတဲ့ ခွဲထွက်စဉ်းစားတတ်မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ ညံ့တဲ့ ပညာရေးကတော့ စိန်ခေါ်ပြီးလုပ်တာမျိုးကို တားမြစ်ပါတယ်။
၇. ကောင်းတဲ့ပညာရေးက ကိုယ်ပိုင်အယူအဆကို ပုံဖေါ်ဖို့အားပေးပြီး ညံ့တဲ့ပညာရေးကတော့ ရှိပြီးသားစံပြ အဖြေတွေနဲ့ ယူဆချက်တွေကိုပဲ ခွင့်ပြုတယ်။
၈. ကောင်းတဲ့ပညာရေးက တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ မွေးရာပါဗီဇထူးချွန်မှုတွေကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ဖို့ကူညီပေးတယ်။ ညံ့တဲ့ပညာရေးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတယ်။
ကွာခြားချက်တွေကို ဖတ်ရှူပြီးရင် ပညာရေးကောင်းဖို့ ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပြောစရာ တောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသွားရောက်သင်ကြားလိုသူများအတွက် ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
အမေရိကန် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များအကြောင်း တစ်ဦးချင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်
More in this category: « ပထမဆုံး ကျောင်းစတက်မယ့် ကလေးငယ်များကို ဘာတွေပြင်ဆင်ပေးရမလဲ	မိဘများ သား၊ သမီးများအပေါ် မှားယွင်းတတ်သောအုပ်ထိန်းမှုအချက် ၅ချက် »
မိဘများ မှားယွင်းတတ်သောအုပ်ထိန်းမှုအချက် ၅ချက်